Nanambara tamin’ny fomba ofisialy i Arlette Ramaroson fa ho isan’ny kandida ho fidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena 2018. Mpitsara iraisam-pirenena nandritra 15 taona ny tany Rwanda ny tenany. Niverina nitodi-doha teto an-tanindrazana izy ny taona 2016. “Mahatsapa ny tenako fa manana andraikitra hanala ny vahoaka Malagasy ao anaty fahantrana. Raha 30% ny tahan’ny fahantrana tamin’ny taona 1960, efa niakatra 90% izany amin’izao fotoana. Hitondra ny anjara birikiko amin’ny fanenana izany aho. Nanapa-kevitra ny hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena aho mba hanantanterahana ireo vinam-piarahamonina hanarenana an’i Madagasikara”, hoy i Arlette Ramaroson, Filohan’ny Vovonana Tia Tanindrazana ho an’ny fanarenana an’i Madagasikara.
Ovaina ny rafitra
Hatontona any amin’ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka, fanabeazana, ny sosialim-bahoaka ny vola rehetra lany amin’ny fampiodinana ny Antenimierandoholona. “Ho foanana io andrim-panjakana io ary ho ampiasaina hampidirana ny zaza Malagasy rehetra an-tsekoly, hanampiana ny hopitalim-panjakana ka ho maimaim-poana ny fitsaboana rehetra ny volabe miodina ao”, hoy izy. Ao anatin’ny vinam-piarahamonina ho tontosain’ny vovonana rehefa tonga eo amin’ny fitondram-panjakana ihany koa ny fanovana ny rafitra eto amin’ny firenena. “Apetraka ny tetikasa miainga any amin’ny fokontany. Aorian’ny faneken’ny rehetra ny sarin-tany ara-toekarena vaovao an’i Madagasikara, hitsangana ny faritra mizaka tena (région autonome) na ara-pitantanana na ara-bola. Ho rava ny faritany enina teo aloha”.
‹ MPITANTANANA NY VOLAN’NY KAOMININA: Olona tendren’ny ministeran’ny vola	› “MARCHE O ‘SOLDES”: Vente et exposition des accessoires de dernier cri